Pôrnôgrafia ao amin’ny Whatsapp ao Brezila: Adihevitra amin’ny fahalalahana ara-pananahan’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2018 15:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, Español, Português
Fran, tovovavy mpianatra 19 taona, mampihatra ny firaisana amin'ny vava miaraka amin'ny olon-tiany izay 22 taona ao an-tanànan'i Goiânia. Nalain'ilay tovolahy horonantsary amin'ny findainy rehefa izy manontany iny hoe “mila ny fitombenako ve ianao? tery tsara izy io” ary manao famantarana amin'ny firaisana any amin'ny lava-pitombenana. Andro vitsivitsy taty aoriana, naparitany tao amin'ny whatsApp ilay horonantsary, “fitehirizana sary vetaveta tsy niniana”, any Brezila, sehatra fiainana manokana an'olondroa izay jerena tsy misy avakavaka.
Niteraka resabe tamin'ny fitsaràna mpanome maoraly, mpihetraketraka sy mpihatsaravelatsihy ity toe-javatra ity, ary mafy ny fiantraikany teto amin'ny aterineto tato ho ato. Olona an-jatony no namoaka sary miaraka amin'ny fihetsika OK sy ny tenirohy #ForçaFran izay lasa sary-sy-soratra ao amin'ny Twitter sy ny Instagram. Ny sasany mampiseho firaisan-kina fa ny sasany kosa maneso, araka ny fanazavan'i Manu Barem,(@manubarem) , mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny tranokala Youpix:
Eny fa na dia i Neymar sy i Daniel Alves izay milalao ao amin'ny klioba espaniola ao Barcelona, na ilay mpihira Leonardo aza dia namoaka sary tao amin'ny aterineto miaraka amin'ny famantarana OK, araka ny fitantaran'ny gazety ao Goiâna. Tamin'ny asabotsy 12 oktobra, nandritra ny lalao ara-pirahalahiana teo amin'i Brezila sy Korea Atsimo tao Seoul, nitondra sora-baventy miaraka amin'ny teny filamatra “forçan fran” ireo mpanohana. Sary nivezivezy tany amin'ny aterineto, mampiseho ny fiantraikan'io raharaha io.
Ankoatra ny sary sy hafatra nosoratrana tamin'ny fihomehezana mampiasa ny lohateny hoe “KKKK”, izay tena mahazatra any Brezila, nampiasa ny tambajotra sosialy ihany koa ireo mpikatroka aterineto mba hiresahana ilay tranga. Azo natao ihany koa ny namaky fanehoan-kevitra tahaka ity ao amin'ny twitter:
#forçafran fitombenako. Iza no niteny azy mba ho vendrana sy kentrina ka hamela lehilahy haka horonantsary azy rehefa izy miaraka aminy? fantatra hivezivezy izany
Mba ho fanohanana an'i Fran, nanoratra tao amin'ny tranokala Na Pimentaria ilay mpanao gazety Nathalia Ziemkiewicz
Noforonina tao amin'ny facebook ny pejy Apoio Fran [Manohana an'i Fran aho] ary efa manana mpanara-dia maherin'ny 30 000. Ao amin'ny youtube, namoaka ity raharaha ity i Andrea Benetti, iray amin'ireo nanokatra ilay pejy facebook Moça, você é machista [ ry tovovavy, mihetraketraka ianao]. Araka ny heviny, mitsara ny tovovavy amin'ny fomba fampiharany ny firaisany ara-nofo tantara ity.
Taorian'izany ranty malaza izany dia niala tao amin'ilay tranombarotra niasany i Fran ary nitory ilay lehilahy tao amin'ny brigady misahana manokana ny fikarakarana vehivavy ao Goiâna. Mety higadra 3 volana hatramin'ny heritaona ilay tovolahy noho ny fanalam-baraka raha miditra ao amin'ny rafitry ny lalàna Maria da Penha [ Lalàna mifehy ny herisetra atao amin'ny vehivavy]. Na izany aza, tsy nety nanome ny findainy ny polisy izy ary nangina nandritra ny famotopotorana azy. Nandà ny maha tompon'ilay raki-tsary azy izy.